सामाजिक व्यवसाय मा पहिलो चरण: खोज | Martech Zone
मैले भर्खर (दोस्रो पटक) महान पुस्तक पढ्ने समाप्त गरें, सामाजिक व्यवसाय डिजाइन द्वारा: जडान भएको कम्पनीको लागि परिवर्तनकारी सामाजिक मिडिया रणनीतिहरू, द्वारा Dion Hinchcliffe र পিटर किम.
मैले प्रायः सुन्ने प्रश्न भनेको "हामी कहाँबाट सुरू गर्छौं?" छोटो उत्तर यो हो कि तपाइँले गर्नु पर्छ सुरुमा सुरू गर्नुहोस्, तर हामी कसरी शुरुआत परिभाषित गर्छौं सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो।
संगठन कसरी जान्छ सामाजिक सहयोग एकीकृत गर्दै र सामाजिक व्यवसाय तिनीहरूको कार्यात्मक क्षेत्रहरूमा सबै अवधारणाहरू? यो एक सबै वा केहि प्रयास हो, वा यो एक सूचित व्यापार रणनीति द्वारा मध्यम गर्नुपर्छ? एउटा सामान्य खोज प्रयासमा सबै बुझ्ने र कागजात समावेश गर्दछ प्रक्रियाहरू, घटनाहरू, र ट्रिगर गर्दछ संगठन भित्रका गतिविधिहरूमा सान्दर्भिक। उदाहरण को लागी, खरीद अर्डर बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक घटनाहरूको शृंखलाबद्ध श्रृंखलाहरू के हुन्? एक चलानी? एक ग्राहक गुनासो ट्विटर मा शुरू? एक उत्पाद वापसी?
धेरै संगठनहरूले सामाजिक गतिविधिहरू पहलमा यो धारणा राख्नेछन् कि प्रक्रियाहरूलाई सामाजिक गतिविधिहरू अगाडि र केन्द्रको साथ मिलाइनु पर्छ। र यो नयाँबाट शाब्दिक स्केच प्रक्रियाहरूमा धेरै लोभ्याउने भयो सामाजिक अपरिहार्य। जब सबै अवस्थित प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न थिच्दा, धेरै संस्थाहरूसँग त्यो हातमा हुँदैन। र यसले जोडतोडको भावनालाई थप गर्न सक्दछ, कारण त्याग गर्न।
तर अर्को, र मेरो विचारमा, उत्तम दृष्टिकोण पहिले पूर्ण रूपमा पहिचान गर्नु हो सबै अवस्थित प्रक्रियाहरू प्रवाह, निर्भरता, स्रोतहरू, आदि। त्यसो गर्नुको एक कारण यो छ कि अधिकतर अपवादहरूलाई नक्सा गरिएको छैन, र नबुझी बुझिन्छ। व्यक्ति प्रायः यी गतिविधिहरूको वरिपरि संरचना निर्माण गर्ने बारे सोच्दैनन्, र तिनीहरू प्रायः पर्याप्त गतिशील हुन्छन्।
यस प्रकारको अग्रिम व्यायामले संसाधनहरूमा पर्याप्त लगानी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यहाँसम्म कि SAP, Oracle, र अन्य जस्ता उद्यम व्यापक अनुप्रयोगको लागि, यो पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ कि ब्यापार प्रक्रिया र निर्भरता शाब्दिक म्याप आउट हुन्छन् धेरैले बुझ्ने गरी। तर एक सामाजिक व्यापार पहल शुरू गर्नुहोस् यस अग्रिम प्रयास बिना पनि यसले कारकहरू पहिचान गर्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ जुन प्रक्रिया सुधारहरू नाप्नका लागि मेट्रिकहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाईं आफ्नो ग्राहक सेवा रिपोर्टको हिस्साको रूपमा ट्विटर वा फेसबुकको प्रयोगको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने (वा गम्भीर हुने)। बच्चा चरणहरू।
अवस्थित प्रक्रिया बहाव र गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने अर्को कारण यो व्यायाम आफैले प्राय: गर्न सक्ने हुन्छ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहोस् जहाँ अपवादको ओभरल्याप हुन्छ, हटस्पट यदि तपाईं हुनेछ। प्रक्रियाहरूमा हटस्पटको धारणा पनि एक वाटरहोल अवस्थित छ भन्ने सूचक हुन सक्छ, जहाँ विचलित फंक्शनल समूहका मानिसहरू अनौपचारिक रूपमा भेटिन्छन् (वा वस्तुतः पनि) जानकारी आदान प्रदान गर्न। प्रायः, यी अवस्थित प्रक्रिया प्रवाहहरूमा परिभाषित हुँदैनन्।
यस प्रकारको दृष्टिकोणले धेरै सामाजिक गतिविधिहरूलाई सही रूपमा फ्रेम गर्दछ कि यसले अवस्थित प्रक्रियाहरूमा सहायकको रूपमा कार्य गर्नुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि एक संस्थाले बढी सहयोगी, ग्राहक केन्द्रित, आदि भएको भन्ने कुरा हराइरहेको छ। यसले यो बुझाउँदैन कि सामाजिकलाई मद्दतको लागि काम गरिरहेको छ धेरै विशिष्ट व्यापार समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्.
नोट: त्यो पुस्तकमा एक सम्बद्ध लिंक हो!
टैग: डायोन हिन्चक्लिफखोजपीटर किमसामाजिक व्यवसायसामाजिक व्यवसाय डिजाइन द्वारासामाजिक मिडिया रणनीतिसामाजिक रणनीति
नोभेम्बर,, २०१ at 27::2012 बिहान
मार्टी, पोष्ट मन पराउछ। ठाउँ मै।
डिसे 4, 2012 मा 11: 11 AM
उच्च प्रशंसा, वास्तवमा, एक मास्टरबाट आउँदैछ। ठूलो धन्यवाद, क्रिस।
नोभेम्बर २०, २००। 29::2012 अपराह्न
उत्कृष्ट सिंहावलोकन, यसले मलाई केहि कुरा दर्सायो जुन मैले महसुस गरिन
पहिले। म तपाईंको अद्भुत काम को लागी प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। म पनि उस्तै राम्रो आशा गर्दैछु
भविष्यमा तपाईं बाट पनि काम गर्नुहोस्। हामीलाई यो जानकारी साझा गर्न को लागी धन्यवाद।